Udiyaar Garowga Ciidul Adxaa oo siweyn loogaga dareemay Magaalooyinka Somalia – SBC
Udiyaar Garowga Ciidul Adxaa oo siweyn loogaga dareemay Magaalooyinka Somalia
Posted by Webmaster on Noofember 4, 2011 Comments
Udiyaar garowga Ciidul Adxaa ayaa siweyn loogaga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee gudaha Soomaaliya,
Guud ahaan suuqyada magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolada Dalka ayaa waxaa ka jira samad aad u weyn oo ay dadka soomaaliyeed ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidul adxaaga oo ay inaga xigto maalmo qura.
Waxaa ay dadku ka adeeganayaan suuqayada, iyaga oo gancaha heystay Ciyaalkooda si ay ugu iibiyaan waxyaabaha ciidaka ay ku maamuusi lahaayeen sida Dhar, Kabo iyo weliba waxyaaabaha ka farxiya ee ay aadka u jecelyihiin.
Magaalooyinka ugu waaweyn Puntland ayaa sidoo kale siweyn loogaga dareemayaa u diyaar garowga ciidul adxaaga, iyadoona ay dadku muujinayaan sida ay ugu diyaar garoobeen ciida 2aad ee Islaamka.
Qaar ka mid ah Ganacstada Boosaaso oo la hadlay SBC International ayaa sheegay in ay si heersare ah ugu kala socdaan ganacsigooda islamarkaana ay dadku iibsanayaan waxayaabaha ay keenaan gaar ahaan Dharka iyo Kabaha.
Sidoo kale Ganacstada ka ganacsada xoolaha nool ayaa iyaguna sheegay in dadweynaha siweyn u iibsanayaan xoolaha nool maadaama ciidan ay tahay ciida udxiyada la bixiyo ayna dadkii awoodaa qalayaan xoolaha nool sida ariga.
Maanta oo ah Maalin jimce ah ayaa waxaa ay istaageen dadka gudanaya waajibaadka Xajka magaalada Minaa iyadoo lagu wado in maalmo ka bacdi ay istaagaan banka carafo.